Ụbọchị My Pet » 8 Great mbụ Ụbọchị Ajụjụ I Kwesịrị Jụọ
Anyị na-niile anọwo na mbụ ụbọchị. Ma na ha dugara a mmekọrịta ma ọ bụ biri mgbe a ole na ole ụbọchị, anyị nile maara nrụgide na nchegbu na-abịa na nke mbụ a inaugural nzukọ. N'ezie, mbụ ụbọchị nwere ike nkewa dị ka otu n'ime ndị kasị akwara-egwu ọnọdụ ọha mmadụ na. Ma m ga-ekwe ka ị na a obere ihe nzuzo: isi ihe na-aga nke ọma na mbụ na ụbọchị bụ jụụ, ala mkparịta ụka. Nke a nwere ike mfe na-arụzu site họọrọ nke ọma mbụ ụbọchị ajụjụ.
Ònye nọ na-nnukwu mmetụta ná ndụ gị?
Site na-arịọ ajụjụ a, ị ga-mma ịghọta gị ụbọchị si omume ọma na ụkpụrụ. Ọ ga-egosikwa gị onye ha ga-echigharịkwuru maka nduzi na ndụmọdụ.
Ebee bụ ọkacha mmasị gị ebe ke ofụri ererimbot? Gịnị mere?
Ma ọ bụ na osimiri, ugwu, ma ọ bụ ebe na n'etiti, ajụjụ a ga-enye nghọta n'ime gị ụbọchị 'agwa.
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị nkiri niile oge? Gịnị mere?
Ọ bụghị nanị na nke a ga-egosi gị ụbọchị 'masịrị ya na ọdịmma ma ọ bụ na--egosi ịhụ ma ọ bụrụ na ị na-dakọtara.
Gịnị bụ gị nnukwu ihe mgbaru ọsọ ná ndụ ugbu a?
Ajụjụ a ga-bụghị naanị ịgwa gị otú oké ọchịchọ gị ụbọchị bụ ma ga-enye nghọta n'ime kpọmkwem ogbo nke ndụ nke na ha na-.
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị n'ụzọ na-emefu gị izu ụka?
Azịza nke ajụjụ a ga-egosi gị ụbọchị si ebi ndụ, ọdịmma, na ntụrụndụ. Nke a bụ ihe ọzọ na ezigbo ajụjụ ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ dakọtara.
Gịnị bụ gị na ezinụlọ gị ka na-eto eto?
Inweta a hụperetụ otú gị ụbọchị a zụlitere ga-egosipụta gị otú ha ga- (ma ọ bụ na ụfọdụ na, adịghị bulie) ha ga-eme n'ọdịnihu ụmụ. Nke a na-Azịza ya bụ na-indicative otú ihe gị ụbọchị e si mesoo ná ndụ, na-egosi ọbụna karịa nke ha agwa.
Gịnị ka ị na-ahụ mara mma?
E wezụga inwe onwu na ahụ mma, ege ntị anya ka ihe àgwà gị ụbọchị na-akọwa. Azịza nke ajụjụ a na-agwa ihe kpọmkwem na ha chọrọ na onye. Na ndị ọzọ ọtụtụ mgbe, àgwà ha depụta bụ ndị na ha nwere onwe ha.
Gịnị bụ otu ụbọchị na ị ga na-relive?
Ajụjụ a bụ nnọọ Ẹma ẹwet ka ị bụghị nanị na-enweta a hụperetụ gị ụbọchị ndụ ma ị ga-esi relive ya na ha n'ihi na ndị na nkenke nkeji dị ka ha na-akọwa ya unu.
N'ezie ajụjụ ndị a bụ nanị nzọụkwụ mbụ. Bụrụhaala na ị na-ege ntị nke ọma, abụghị kwa onwe onye ma ọ chọsiri, na-ezi, na ị bụ n'aka ka nwere ihe na-atọ ụtọ mbụ ụbọchị.